Zò Amin'ny Fisotron-Dronono, Fisotron-Dronono ho an'ny Olona Hiandraiketana/Olona Velona, Tambim-Bola Amin'ny tsy Fananan'asa - Madagascar - Votresalaire.org/Madagascar
Accueil Droit du Travail Sécurité Sociale Fiahina Ara-tsosialy
Zò amin'ny fisotron-dronono
Ny Fehezandalàna mikasika ny fiarovana ara-tsosialy mametra ny fisotron-dronono manontolo na ampahany. Ho an'ny fisotron-dronono manontolo, takiana ny fahatratrarana ny faha-60 taona (55 taona ho an'ny vehivavy), arahina fizakana ny zò mandritra 15 taona farafahakeliny, ao anatin'izany ny 28 in-telovolana nandoavana ny latsakemboka mandritra ny 10 taona teo aloha. Ho an'ny fisotron-dronono amin'ny ampahany, ny mpiasa tokony hizaka ny zòny farafahakeliny 100 in-telovolana (lehilahy) na 80 in-telovolana (vehivavy). Raha sendra tsy mahafeno ireo fepetra mikasika ny fisotron-dronono manontolo na ampahany ireo ny mpiasa, misy ihany koa ny karazana fandoavam-bola firaisan-kina; saingy ireo mpiasa niasa nandritra ny fe-potoana 1964-1968 ihany no voakasik'izany.
Fisotron-dronono ho an'ny olona hiandraiketana / Olona velona
Ireo lalàna voalaza etsy ambony dia mametra ny fahazoana fisotron-dronono ho an'ny olona velona (anisan'izany ireo olona hiandraiketana, ny maty vady lahy/vavy, ny ankizy). Ny mpiasa nindaosin'ny fahafatesana dia tokony nizàka ny fisotron-dronono na feno 55 taona farafahakeliny (50 taona ho an'ny vehivavy) ary efa nahafeno ireo fepetra fandoavana latsakemboka ho an'ny fisotron-dronono. Ny fisotron-dronono ho an'ny velona dia harotsaka isaky ny telo volana. Ny mpiasa maty vady lahy/vacy dia mandray 30%n'ny fisotron-dronon'ny mpiasa nahazo fiantohana ary ny mpiasa lahy/vavy nahazo fisotron-dronono dia mandray ny 15% ihany. Ireo ankizy kamboty dia manana zò handray ny fisotron-dronono ho an'ny velona. Ny fisotron-dronono ho an'ny velona dia tapaka rehefa miroso amin'ny fanambadiana vaovao (ho an'ny lahy/vavy maty vady na ho an'ny ankizy feno 15/22 taona ho an'ireo olona manana fahasembanana sy ny mpianatra (ho an'ny kamboty).
Tolotra nohon'ny tsy fahafahana miasa
Ireo làlana voalaza etsy ambony milaza ny fisian'ireo tolotra fiahina nohon'ny tsy fahafahana miasa raha sendra loza/ratra/aretina vokatry ny asa ka mitarika tsy fahafahana miasa maharitra. Ny mpiasa tsy maintsy feno 55 taona farafahakeliny (lahy) na 50 taona (vavy) ary arahina fahaverezana farafahakeliny 60%n'ny fahafahana miasa sy farafahakeliny 10 taona nizakàna ny zo fiahina, tafiditra amin'izany ny 28 in-telovolana nandritra ny 10 taona teo aloha. Ny tolotra fiahina nohon'ny tsy fahafahana miasa dia 80%n'ny fisotron-dronono. Misy koa ny karazana tolotra fanampininy ho an'ireo olona hiandraiketana.
Fitsipika mikasika ny fiahiana ara-tsosialy
Didim-panjakana Laharana. 69-145 tamin'ny 8 aprily, mikasika ny Fehezandalàna amin'ny Fiantohana Sosialy / Décret No. 69-145 du 8 avril, sur le Code de l'assurance sociale / Decree No. 69-145 of 8 April, on the Social Insurance Code
Lalàna Laharana. 94-026 tamin'ny 17 novambra, mikasika ny Fehezandalàna mikasika ny fiarovana Sosialy / Loi No. 94-026 du 17 novembre, sur le Code de la protection sociale / Law No. 94-026 of 17 November, on the Social Protection Code
Tambim-bola Amin'ny Tsy Fananan'asa Aro Loza Mikasika ny Fiasana Asa sy Aretina Conventions collectives - base de données
Citer cette page © WageIndicator 2017 - Votresalaire.org/Madagascar - Fiahina Ara-tsosialy